လူအများကို လွှမ်းမိုးနိုင်သူများ ၏ တွေးခေါ်ပုံ တွေးခေါ်နည်း – Gentleman Magazine
တစ်ခါတစ်လေမှာ တစ်ချို့ကိစ္စတွေဟာ ကျွန်တော်တို့ ထင်မြင်ယူဆထားသလို ဖြစ်မလာတတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် တစ်ချို့လူတွေကတော့ အားလုံးရဲ့ထင်မြင်ယူဆချက်တွေနဲ့ ဆန့်ကျင့်ပြီး အောင်မြင်မှုတွေကို သိမ်းပိုက်သွားနိုင်ကြပါတယ်။ ဥပမာပြောရရင် နည်းပညာလုပ်ငန်းချင်းအတူတူမှာ Apple က ဘာကြောင့်များ ဆန်းသစ်တီထွင်မှုတွေ ရှိနေတာလဲ၊ လူမဲတန်းတူအခွင့်အရေးရဖို့ တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့သူတွေ အများကြီးထဲကမှ Martin Luther King ကို ဘာကြောင့် လူသိများရတာလဲ။ လေယာဉ်ပျံတီထွင်နိုင်တဲ့ အခြားအဖွဲ့အစည်းတွေရှိခဲ့ပေမယ့် ဘာကြောင့်များ Wright ညီနောင်က ထင်ရှားကျော်ကြားရတာလဲ ဆိုတာက စဉ်းစားစရာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
တကယ်တော့ Apple၊ Martin Luther King နဲ့ Wright ညီနောင်တို့သာမက ကမ္ဘာမှာရှိတဲ့အခြားသော လွှမ်းမိုးနိုင်စွမ်းရှိတဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေ၊ လူပုဂ္ဂိုဟ်တွေအားလုံးဟာ နည်းလမ်းတစ်ခုတည်းနဲ့ပဲ တွေးခေါ်ပြုမူ၊ ပြောဆိုဆက်သွယ်လေ့ရှိကြပါတယ်။ ဒီနည်းလမ်းကလည်း ကမ္ဘာမှာ အရိုးရှင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုပါပဲ။ Golden Circle လို့ ခေါ်ပါတယ်။
Why ဘာကြောင့်လဲ ? How ဘယ်လိုလဲ ? What ဘာလဲ ? တို့နဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ Golden Circle ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ Golden Circle ကို မှန်မှန်ကန်ကန်အသုံးပြုပြီး တစ်ချို့သောခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေဟာ လူတွေရဲ့စိတ်ကို လွှမ်းမိုးရယူနိုင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ Golden Circle သဘောတရားမှာ ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဘယ်အဖွဲ့အစည်းပဲဖြစ်ဖြစ် သူတို့ဘာလုပ်တာလဲ . ဘာရောင်းလဲ . ဘာဝန်ဆောင်မှု ပေးလဲ ဆိုတဲ့ What ကို (၁၀၀)ရာခိုင်နှုန်း သိကြပါတယ်။ တချို့ကတော့ ဘယ်လို သူများထက်သာအောင်. ကောင်းအောင် လုပ်မှာလဲဆိုတဲ့ How ကိုသိကြပါတယ်။ ဒါ့ပေမယ့် ဘာကြောင့်လုပ်ရတာလဲဆိုတဲ့ အဓိကကျတဲ့ ဇစ်မြစ်ကို Why ကိုသိတဲ့လူပုဂ္ဂိုဟ်နဲ့အဖွဲ့အစည်းကတော့အရမ်းကိုနည်းပါတယ်။
ဘာပဲလုပ်လုပ် အကျိုးအမြတ်ရချင်လို့ ဆိုတဲ့ Why မျိုးကို ဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူး။ အကျိုးအမြတ်သာ ကြည့်မယ်ဆိုရင် What အဆင့်ထဲမှာပဲရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်ဆိုလိုတဲ့ Why က သင့်ရည်ရွယ်ချက်က ဘာလဲ? အကြောင်းရင်း၊ ယုံကြည်မှုက ဘာလဲ? သင့်အဖွဲ့အစည်း ဘာအတွက်ရပ်တည်နေတာလဲ? သင် ဘာအတွက် မနက်တိုင်း အိပ်ရာထဲက ထလာတာလဲ? စတဲ့သင်လုပ်နေတာကိုဘာကြောင့်လုပ်နေရတာလဲဆိုတဲ့အကြောင်းရင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ အများစုက အရိုးရှင်းဆုံး What ကနေစပြီး အရှုပ်ထွေးဆုံး Why ဆီကိုသွားတဲ့ အပြင်မှအတွင်းသို့ ပြောင်းပြန် ချဉ်းကပ်မှုကိုပဲ လုပ်ဆောင်လေ့ရှိပါတယ်။ ဥပမာ ကိုယ်စိတ်ဝင်တစား လုပ်ချင်တဲ့ ကိုယ်ဝါသနာပါတဲ့ အလုပ်မဟုတ်ပဲ နဲ့ . . . ဘာလုပ်ရင်ကောင်းမလဲ ဘာလုပ်ရင်မြတ်မလဲ ဆိုတဲ့ အတွေးမျိုးနဲ့ လုပ်တဲ့ အလုပ်မျိုးတွေပါ။ ဒါပေမယ့် အခြားလူတွေကို လွှမ်းမိုးနိုင်စွမ်းရှိတဲ့ ခေါင်းဆောင်တွေ၊ အဖွဲ့အစည်းတွေကတော့ ကျွန်တော်တို့နဲ့ ပြောင်းပြန်နည်းလမ်းဖြစ်တဲ့ အတွင်းမှ အပြင်သို့ ချဉ်းကပ်မှု. ဘာအတွက်လဲ ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတာကို ပထမဆုံး ဦးစာပေး သုံးလေ့ရှိပါတယ်။
အားလုံးကသိကြတဲ့ Apple ကုမ္ပဏီကို ဥပမာထားပါရစေ။ အကယ်၍ Apple ကုမ္ပဏီက အခြားကုမ္ပဏီတွေလိုပဲ “ကျွန်တော်တို့ဆီက အကောင်းဆုံးကွန်ပျူတာတွေ ထုတ်လုပ်ပါတယ်။ ဒီကွန်ပျူတာတွေက ဒီဇိုင်းသေသပ်လှပပြီး အသုံးပြုရလွယ်ကူပါတယ်။ တစ်လုံးလောက် ၀ယ်ယူသုံးစွဲကြည့်ပါ” လို့ ကြော်ငြာမယ်ဆိုရင် သင်ဝယ်ချင်ပါသလား။ သင့်စိတ်ကို ထူးထူးခြားခြားမဆွဲဆောင်နိုင်ဘူးဆိုတာ သေချာပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ အများစုက ဒီလိုပဲ ဆက်သွယ်လေ့ရှိကြပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ဘာလုပ်ထားတယ်။ ဘယ်လို ကွဲပြားတယ်ဆိုတာလောက်ကိုပဲ အလေးပေးဖော်ပြနေကြပါတယ်။ ဒီနည်းလမ်းက လူတွေရဲ့စိတ်ကို လွှမ်းမိုးနိုင်စွမ်းမရှိပါဘူး။
“ကျွန်တော်တို့ဘာပဲလုပ်လုပ် အခြေအနေတစ်ရပ်ကို ပြောင်းလဲနိုင်မယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။ ကွဲပြားခြားနားတဲ့ တွေးခေါ်မှုတွေကို ကျွန်တော်တို့ ယုံကြည်လက်ခံထားပါတယ်။ လက်ရှိအခြေအနေကို ပြောင်းလဲပစ်လိုက်နိုင်ဖို့အတွက် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ထုတ်ကုန်တွေကို ဒီဇိုင်းဆန်းသစ်ပြီး သုံးစွဲသူအဆင်ပြေအောင် ဖန်တီးထုတ်လုပ်ရပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ ကျွန်တော်တို့ အကောင်းဆုံးကွန်ပျူတာတွေကို ထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ တစ်လုံးလောက် စမ်းသုံးကြည့်ပါ။”
ဆက်သွယ်ပုံခြားနားချက်ကို သင်မြင်ပါသလား။ ကွန်ပျူတာတစ်လုံးလောက် ၀ယ်သုံးကြည့်ချင်စိတ်ပေါ်သွားမှာ သေချာပါတယ်။ အဓိကအချက်ကတော့ လူတွေက သင်ဘာလုပ်လဲဆိုတာက ကြည့်တာမဟုတ်ပါဘူး။ သင်ဘာကြောင့်လုပ်လဲဆိုတာကိုပဲ ကြည့်တတ်ကြတယ်ဆိုတာပါပဲ။
ဒီလိုဆက်သွယ်လွှမ်းမိုးနိုင်မှုကြောင့်ပဲ ကျွန်တော်တို့အားလုံးက Apple ကွန်ပျူတာတွေကို ၀ယ်ချင်ကြသလို Apple ထုတ်လုပ်တဲ့ MP3 player နဲ့ မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းတွေကိုလည်း ယုံယုံကြည်ကြည် ၀ယ်ယူသုံးစွဲလိုစိတ်ရှိကြပါတယ်။ တကယ်တော့ Apple က သူ့ရဲ့ပြိုင်ဖက်တွေနည်းတူ ကွန်ပျူတာကုမ္ပဏီတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ အခြားနည်းပညာကုမ္ပဏီတွေလည်း Apple ထုတ်ကုန်တွေလောက် အရည်အသွေးရှိတဲ့ ပစ္စည်းတွေကို ထုတ်လုပ်နိုင်ကြပါတယ်။ Dell ကုမ္ပဏီက MP3 စက်တွေနဲ့ DVR စက်တွေ ထုတ်လုပ်ရောင်းချခဲ့ဖူးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ၀ယ်ယူသုံးစွဲသူ အလွန်နည်းပါတယ်။ ဘာကြောင့်မျာ Dell ကုမ္ပဏီထုတ် MP3 ကို မ၀ယ်ချင်ရတာလဲ စဉ်းစားကြည့်ပါ။ အဖြေက ရှင်းပါတယ်။ Dell က ကွန်ပျူတာထုတ်လုပ်တဲ့ ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်နေလို့ပါ။ ဒီလောက်ဆိုရင် လူတွေက သင်ဘာလုပ်လဲဆိုတာထက် ဘာကြောင့်လုပ်တာလဲဆိုတာကို ပိုစိတ်ဝင်စားတတ်ကြတာကို သဘောပေါက်မှာပါ။
Golden Circle ကို အတွင်းကနေ အပြင်ကို ပြောင်းပြန်ဆက်သွယ်တဲ့နည်းလမ်းဟာ အယူအဆ သက်သက် မဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ ဦးနှောက်ဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ ဆိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဦးနှောက်ကို Golden Circle ရဲ့ ပါဝင်အစိတ်အပိုင်းတွေအတိုင်း အပိုင်း(၃)ခုနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။ Neocortex လို့ ခေါ်တဲ့ ဦးနှောက်ရဲ့ အပြင်ဖက်ဆုံးအလွှာဟာ What ကို ကိုယ်စားပြုပါတယ်။ ကျိုးကြောင်းဝေဖန်မှုတွေ၊ ဘာသာစကား ဆန်းစစ်မှုတွေကို တာဝန်ယူလုပ်ဆောင်ပေးတဲ့အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ အတွင်းဖက်အပိုင်း(၂)ခုကတော့ Limbic brains လို့ခေါ်ပြီး ယုံကြည်မှု၊ သစ္စာတရား စတဲ့ခံစားချက်တွေကို သိရှိတဲ့အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအတွင်းပိုင်း(၂)ခုက လူတွေရဲ့အပြုအမူ၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ခြင်း တွေကို တာဝန်ယူလုပ်ဆောင်ပေးတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါ့ကြောင့် ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ အပြင်ကနေ အတွင်းကို ဆက်သွယ်မယ်ဆိုရင် လူတွေက အကျိုးရှိမရှိ၊ ကောင်းမကောင်း အချက်အလက်တွေကို နားလည်နိုင်မှာဖြစ်ပေမယ့် သူတို့ရဲ့အပြုအမူကိုတော့ လှုံ့ဆော်နိုင်စွမ်းမရှိပါဘူး။ အတွင်းမှအပြင်သို့ ဆက်သွယ်ရာမှာတော့ ကျွန်တော်တို့ဟာ အပြုအမူကိုတာဝန်ယူထားတဲ့ အပိုင်းကို တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ပြောဆိုတာဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးတော့မှ ဒီအချက်ကို ခိုင်မာစေနိုင်တဲ့ အရာတွေနဲ့ ထပ်လောင်းပြီး ယုံကြည်မှုကို ရယူတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် အတွင်းမှ အပြင်သို့ ဆက်သွယ်မှုကို လူတွေက ပိုပြီး ယုံကြည်သက်ဝင်တတ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။
သင့်ရဲ့ Why ကို သင်ကိုယ်တိုင်မသိရင် အခြားလူတွေကလည်း သိမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါဆို လူတွေကို သင်ပြောတာလက်ခံလာအောင် ဘယ်လိုပြောပြောရမှာမဟုတ်သလို သင်ဖြစ်စေချင်တာကို ဖြစ်လာဖို့လည်း တတ်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ အဓိကဆိုလိုရင်းက လူတွေကို သင်ယုံကြည်တဲ့အတိုင်း ထပ်တူယုံကြည်လာစေဖို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ယုံကြည်ချက်တူတဲ့သူတွေနဲ့အတူ အလုပ်တွဲလုပ်ဖို့ပါ။ အကယ်၍ အလုပ်လိုအပ်သူတစ်ယောက်ကို အလုပ်ပေးလိုက်တယ်ဆိုပါစို့။ သူက ငွေကြေးအတွက်ပဲ အလုပ်လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သင်နဲ့ ယုံကြည်ချက်တူသူတစ်ယောက်ကို အလုပ်ပေးလိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ သွေးချွေးနဲ့ရင်းပြီး သင့်အတွက် အလုပ်လုပ်ပေးပါလိမ့်မယ်။ ဒီအကြောင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး Wright ညီနောင်က ဥပမာကောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
၂၀ ရာစုနှစ်အစပိုင်းမှာတုန်းက လူတွေကောင်းကင်မှာ ပျံသန်းသွားနိုင်ဖို့ လူတိုင်းက စိတ်ဝင်စားကြပါတယ်။ ဒီကိစ္စအောင်မြင်ဖို့အတွက် Samuel Pierpont Langley ဆိုသူက လုပ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ ထင်ခဲ့ကြပါတယ်။ Samuel ကို ကောင်းကင်မှာပျံသန်းနိုင်တဲ့ ယန္တရားတီထွင်ဖို့အတွက် စစ်ဘက်က ဒေါ်လာ(၅၀၀၀၀) ပံပိုးပေးပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သူက အတော်ဆုံးပုဂ္ဂိုဟ်တွေကို ငှားယမ်းပြီး လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ နာမည်ကျော် သတင်းစာတွေကလည်း သူနောက်ကို တစ်ကောက်ကောက်လိုက်ပြီး သတင်းတွေ ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အခုအချိန်မှာ ကျွန်တော်တို့ အများစုက သူ့အကြောင်းကို မကြားဖူးကြတာ ဘာလိုဖြစ်လို့ပါလဲ။
ဒီလို Samuel Pierpont Langley ကို အားလုံးက အာရုံစိုက်နေကြတဲ့အချိန်မှာ Orville Wright နဲ့ Wilbur Wright တို့ ညီအစ်ကို နှစ်ဦးကို သိတောင်မသိကြပါဘူး။ သူတို့မှာ ငွေကြေးလည်း မရှိပါဘူး။ သူတို့ရဲ့ စက်ဘီးဆိုင်လေးက ရတဲ့ အကျိုးအမြတ်နဲ့ အိပ်မက်ကိုအကောင်အထည်ဖော်နေခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ညီအစ်ကိုနှစ်ယောက်အပြင် သူတို့နဲ့အတူတွဲလုပ်ခဲ့သူတွေကလည်း ဘွဲ့ရပညာတတ်တွေမဟုတ်ပါဘူး။ ဘယ်သတင်းစာကမှလဲ သူတို့အကြောင်းကို ဖော်ပြတာမျိုး မရှိပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ကွဲပြားခြားနားချက်ကတော့ Wright ညီနောင်က ရည်ရွယ်ချက်၊ ယုံကြည်ချက်ရှိရှိနဲ့ လုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ပျံသန်းနိုင်တဲ့ စက်ပစ္စည်းတစ်ခုကို တီထွင်နိုင်ရင် ကမ္ဘာကြီးပြောင်းလဲသွားမယ်ဆိုတာကို ညီအစ်ကိုနှစ်ယောက်စလုံးက ယုံကြည်ခဲ့ပါတယ်။ Samuel Pierpont Langley ကတော့ သူအောင်မြင်ဖို့ သူချမ်းသာဖို့ စတဲ့ ရလဒ်တွေကိုပဲ အာရုံစိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို ရည်ရွယ်ချက် အကြောင်းရင်းချင်း မတူညီတာကြောင့် Wright ညီနောင်နဲ့ နောက်လိုက်အဖွဲ့က သွေးရောချွေးရော ရင်းပြီး အိပ်မက်ကို ၀ိုင်းဝန်းအကောင်အထည် ဖော်နိုင်ခဲ့ကြပေမယ့် Samuel ရဲ့ အတော်ဆုံးအဖွဲ့ကတော့ ငွေကြေးအတွက်ပဲ လုပ်ခဲ့တာကြောင့် ဘာမှဖြစ်မလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
လူတွေဟာ ရည်ရွယ်ချက်ချင်း၊ ယုံကြည်ချက်ချင်း တူမှ လက်တွဲတတ်ကြတာကို Martin Luther King ကို ဘာလို့ ထောက်ခံခဲ့ကြတာလဲဆိုတာကြည့်ရင် သိနိုင်ပါတယ်။ (၁၉၆၃)ခုနှစ် နွေရာသီမှာ ၀ါရှင်တန်မြို့က Martin Luther King ရဲ့ ဟောပြောပွဲကို တက်ဖို့ လူပေါင်း (၂၅၀၀၀၀)ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ ဒီဟောပြောပွဲအတွက် ဖိတ်စာတွေလဲ မကမ်းထားပါဘူး။ နေ့စွဲနဲ့ အချိန်သိဖို့ အင်တာနက်မှာတက်ကြည့်စရာ ၀က်ဘ်ဆိုက်လည်း မရှိသေးပါဘူး။ ဒီလောက်လူအများကြီး တစ်ချိန်တည်း ဘာကြောင့်ရောက်လာခဲ့တာလဲဆိုတာ အံ့သြစရာပါပဲ။ Martin Luther King တစ်ယောက်တည်း လူမဲတန်းတူအခွင့်အရေးအတွက် တိုက်ပွဲဝင်နေတာမဟုတ်ပါဘူး။ သူပြောတဲ့တစ်ချို့စိတ်ကူးတွေက မကောင်းပါဘူး။ ဒါပေမယ့် သူမှာ အစွမ်းတစ်ခုတော့ရှိပါတယ်။ သူက အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုက ပြောင်းလဲဖို့ လိုနေပြီလို့ လူတွေကို မပြောပါဘူး။ သူ့ရဲ့ယုံကြည်ချက်ကိုပဲပြောပါတယ်။ သူ့ယုံကြည်ချက်ကို တစ်ထပ်တည်း ယုံကြည်သူတွေက သူ့လမ်းကြောင်းကို လိုက်လျှောက်ကြပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ယုံကြည်ချက်ကို အခြားလူတွေကို ပြောပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ ယုံကြည်ချက်ထပ်တူကျတဲ့ လူပေါင်း (၂၅၀၀၀၀)ဟာတစ်ချိန်တည်းတစ်နေရာတည်းရောက်ရှိလာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီနေရာမှာ တစ်ခုစဉ်းစားရမှာက ရောက်ရှိလာကြတဲ့ လူတွေထဲမှာ Martin Luther King ကို အားပေးဖို့ လာရောက်ကြသူ ဘယ်နှစ်ယောက်ရှိမယ်ထင်ပါသလဲ။ တစ်ယောက်မှမရှိပါဘူး။ ဒီလူတွေအားလုံးဟာ သူတို့ရဲ့ ယုံကြည်ချက်ကို ချပြဖို့ တကူးတကအချိန်ပေးပြီး လာရောက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ Martin Luther King ပြောတဲ့ “I haveadream” မိန့်ခွန်းတွေထဲမှာ သူတို့ရဲ့ ယုံကြည်ချက်၊ ရည်ရွယ်ချက်ကို သူတို့ရှာဖွေတွေ့ရှိပြီး ကိုယ်ပိုင် ယုံကြည်ချက်အတွက် ရပ်တည်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။
ခေါင်းဆောင်နဲ့ ဦးဆောင်သူ မတူပါဘူး။ ခေါင်းဆောင်ဆိုတဲ့သူတွေက လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာတစ်ခုကို ကိုင်စွဲထားပြီး ဦးဆောင်သူတွေကတော့ ကျွန်တော်တို့ကို လွှမ်းမိုးနိုင်ပါတယ်။ တစ်ယောက်ချင်းပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အဖွဲ့အစည်းလိုက်ပဲဖြစ်ဖြစ် ကျွန်တော်တို့ဟာ လွှမ်းမိုးနိုင်စွမ်းရှိတဲ့ ဦးဆောင်သူနောက်ကို လိုက်ကြပါတယ်။ လိုက်ချင်လို့ကို လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ လိုက်သင့်လို့ လိုက်တာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါ့ကြောင့် အကြောင်းရင်း ရည်ရွယ်ချက် Why နဲ့ စတင်သူတွေကသာ ပတ်ဝန်းကျင်ကို လွှမ်းမိုးနိုင်စွမ်းရှိပြီး အားလုံးကို ဦးဆောင်နိုင်မှာ ဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
နောက်ဆုံး အကောင်းဆုံး ဥပမာကတော့ လက်ရှိမြန်မာနို်င်ငံက ကိုယ်ကျိုးမကြည့် အများအကျိုး အတွက်ရည်မှန်းချက် ကြီးကြီး တုံးတို်က်တိုက် ကျားကိုက်ကိုက် ပြည်သူတွေ ကောင်းစားရေးအတွက် ခြေလှမ်းမတွန့်ပဲ လုပ်ဆောင်ပေးနေတဲ့ နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင် ကို ကြည့်လိုက်ပါ။ သူ အောင်မြင်နေတယ်ထင်ပါသလား ။ လူတွေ အပေါ်ကော လွမ်းမိုး နိုင်နေပြီထင်လား ။ သူ့ နေနဲ့ What . ဆိုတာကို ရှေ့တန်းမတင်ထားပါဘူး။ နိုင်ငံရေးသမား ဖြစ်ချင်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ သမ္မတ လည်းဖြစ်ဖို့အဓိက မဟုတ်ပါဘူး ။ သူ အနေနဲ့လူသားတိုင်း တန်းတူ အခွင့်အရေး ရရှိရမယ် . ပြည်သူတွေ အားလုံး စည်းလုံး ညီညွတ်ပြီး ခေတ်မှီ တိုးတက်သာယာ လှပတဲ့ နိုင်ငံ တော် သစ် ကြီးမှာလူတိုင်း တန်းတူ နေထိုင်နိုင်ရမယ် ဆိုတဲ့ ယုံကြည်ချက် ကြောင့် လုပ်နေတာပါ။ အဲဒီ ယုံ ကြည်ချက်ကသာ နိုင်ငံသား အားလုံးရဲ့ ယုံကြည်ချက်နဲ့ထပ်တူထပ်မျှ ကျလို့ အကုန်ဟတ်ထိပြီး စွမ်းဆောင်ရည် အရည်အချင်းနဲ့ ပြည့်ဝတဲ့ သူ့ ကို ခေါင်းဆောင် ဦးဆောင်သူအဖြစ် နှလုံးသာနဲ့ ရင်းပြီး တင်မြှောက်ထားကြတာပါ။
လမ်းကြုံ တုန်းလေး Gentleman Magazine အကြောင်းဆက်ပြောပြပါမယ်။ Gentleman Magazine ကို ဘာကြောင့်လုပ်ဆောင်ဖြစ်ခဲ့တာလဲ ? GM ထူထောင်သူကိုယ်တုိုင်က ဆယ်ကျော်သက် အရွယ်မှာ ဘာမဆို ဘုမသိ ဘမသိ အလွန်နဲ့ အသိပညာကင်းမဲ့ ခဲ့ပါတယ်။ ရှေ့မှာက လည်း ဦးဆောင် လမ်းပြပေးမယ့် အကို တွေလဲ မရှိခဲ့တဲ့ အတွက် အချစ်ရေး ၊ စီးပွားရေး ၊လူမှုရေး တွေ မှာ အမှားများစွာနဲ့ အခက်အခဲ အမျိုးမျိုး ကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ စာအုပ်တွေဖတ်ဖို့ ကျတော့လဲ လေ့လာမှုအားနည်းခဲ့တဲ့ အတွက် ဘယ်စာအုပ်ရှာဖတ်ရမှန်းမသိခဲ့ ပါဘူး။ အမှားတွေ များစွာ လုပ်ခဲ့ ပြီး အတွေ့ အကြုံ ကပဲ လေ့လာသင်ယူခဲ့ ရတဲ့ အတွက် အချိန်တွေ အများကြီး ဆုံးရှုံး ခဲ့ ရပါတယ်။ ဒီ အခက်အခဲ များစွာ ကို ဖြတ်သန်းပြီး တဲ့ အချိန်ကာလကြာလာတဲ့ အခါ အပေါင်းအသင်းတွေနဲ့ စကားစမည် ပြောဖြစ်ရာကနေ ဒါတွေက လူတိုင်းနီးပါး ကြုံ တွေ့နေရတဲ့ အခက်အခဲများဆိုတာကို သိရှိလာပါတယ်။ လက်ရှိ အချိန်မှာ လဲ အမှားများ လုပ်မြဲ လုပ်စဲ . . အမှားတွေကပဲ ပညာယူနေစဲ ပါ။
ကိုယ့်ညီအကိုတွေ ကိုယ့်လုို အချိန်အများကြီး ပေးပြီး အမှားတွေကနေ သင်ခန်းစာ မယူရအောင် . မမှားသင့်တာတွေ မှားရအောင် အတွေ့အကြုံရှိပြီးသားလူထံမှ သင်ခန်းစာယူနို်င်အောင် အင်တာနက်ပေါ်မှ ဆောင်းပါးကောင်းတာတွေကို ကိုယ့်အတွေ့အကြုံနဲ့ရောသမမွေပြီး ပညာဗဟုသုတ ရစေရန် GM ကနေ ဘာသာပြန်ကာ တဆင့် မျှဝေပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ GM ပရိတ်သတ်တွေ အများတကာ လေးစားချစ်ခင်ရတဲ့ ယောက်ျားကောင်းများ ဖြစ်လာရင်ပဲ ကြိုးစားရကျိုးနပ်ပြီခင်ဗျာ။။။။။။
အမြားကို လှမျးမိုးနိုငျသူတဈယောကျဖွဈအောငျ တှေးချေါပုံ #Money
တဈခါတဈလမှော တဈခြို့ကိစ်စတှဟော ကြှနျတျောတို့ ထငျမွငျယူဆထားသလို ဖွဈမလာတတျပါဘူး။ ဒါပမေယျ့ တဈခြို့လူတှကေတော့ အားလုံးရဲ့ထငျမွငျယူဆခကျြတှနေဲ့ ဆနျ့ကငျြ့ပွီး အောငျမွငျမှုတှကေို သိမျးပိုကျသှားနိုငျကွပါတယျ။ ဥပမာပွောရရငျ နညျးပညာလုပျငနျးခငျြးအတူတူမှာ Apple က ဘာကွောငျ့မြား ဆနျးသဈတီထှငျမှုတှေ ရှိနတောလဲ၊ လူမဲတနျးတူအခှငျ့အရေးရဖို့ တိုကျပှဲဝငျခဲ့သူတှေ အမြားကွီးထဲကမှ Martin Luther King ကို ဘာကွောငျ့ လူသိမြားရတာလဲ။ လယောဉျပြံတီထှငျနိုငျတဲ့ အခွားအဖှဲ့အစညျးတှရှေိခဲ့ပမေယျ့ ဘာကွောငျ့မြား Wright ညီနောငျက ထငျရှားကြျောကွားရတာလဲ ဆိုတာက စဉျးစားစရာပဲ ဖွဈပါတယျ။
တကယျတော့ Apple၊ Martin Luther King နဲ့ Wright ညီနောငျတို့သာမက ကမ်ဘာမှာရှိတဲ့အခွားသော လှမျးမိုးနိုငျစှမျးရှိတဲ့ အဖှဲ့အစညျးတှေ၊ လူပုဂ်ဂိုဟျတှအေားလုံးဟာ နညျးလမျးတဈခုတညျးနဲ့ပဲ တှေးချေါပွုမူ၊ ပွောဆိုဆကျသှယျလရှေိ့ကွပါတယျ။ ဒီနညျးလမျးကလညျး ကမ်ဘာမှာ အရိုးရှငျးဆုံးနညျးလမျးတဈခုပါပဲ။ Golden Circle လို့ ချေါပါတယျ။
Why ဘာကွောငျ့လဲ ? How ဘယျလိုလဲ ? What ဘာလဲ ? တို့နဲ့ ဖှဲ့စညျးထားတဲ့ Golden Circle ဖွဈပါတယျ။ ဒီ Golden Circle ကို မှနျမှနျကနျကနျအသုံးပွုပွီး တဈခြို့သောခေါငျးဆောငျတှနေဲ့ အဖှဲ့အစညျးတှဟော လူတှရေဲ့စိတျကို လှမျးမိုးရယူနိုငျကွတာဖွဈပါတယျ။ ဒီ Golden Circle သဘောတရားမှာ ဘယျသူပဲဖွဈဖွဈ၊ ဘယျအဖှဲ့အစညျးပဲဖွဈဖွဈ သူတို့ဘာလုပျတာလဲ . ဘာရောငျးလဲ . ဘာဝနျဆောငျမှု ပေးလဲ ဆိုတဲ့ What ကို (၁၀၀)ရာခိုငျနှုနျး သိကွပါတယျ။ တခြို့ကတော့ ဘယျလို သူမြားထကျသာအောငျ. ကောငျးအောငျ လုပျမှာလဲဆိုတဲ့ How ကိုသိကွပါတယျ။ ဒါ့ပမေယျ့ ဘာကွောငျ့လုပျရတာလဲဆိုတဲ့ အဓိကကတြဲ့ ဇဈမွဈကို Why ကိုသိတဲ့ လူပုဂ်ဂိုဟျနဲ့အဖှဲ့အစညျးကတော့ အရမျးကိုနညျးပါတယျ။
ဘာပဲလုပျလုပျ အကြိုးအမွတျရခငျြလို့ ဆိုတဲ့ Why မြိုးကို ဆိုလိုတာမဟုတျပါဘူး။ အကြိုးအမွတျသာ ကွညျ့မယျဆိုရငျ What အဆငျ့ထဲမှာပဲရှိပါတယျ။ ကြှနျတျောဆိုလိုတဲ့ Why က သငျ့ရညျရှယျခကျြက ဘာလဲ? အကွောငျးရငျး၊ ယုံကွညျမှုက ဘာလဲ? သငျ့အဖှဲ့အစညျး ဘာအတှကျရပျတညျနတောလဲ? သငျ ဘာအတှကျ မနကျတိုငျး အိပျရာထဲက ထလာတာလဲ? စတဲ့ သငျလုပျနတောကို ဘာကွောငျ့လုပျနရေတာလဲဆိုတဲ့ အကွောငျးရငျးပဲဖွဈပါတယျ။
ကြှနျတျောတို့ အမြားစုက အရိုးရှငျးဆုံး What ကနစေပွီး အရှုပျထှေးဆုံး Why ဆီကိုသှားတဲ့ အပွငျမှအတှငျးသို့ ပွောငျးပွနျ ခဉျြးကပျမှုကိုပဲ လုပျဆောငျလရှေိ့ပါတယျ။ ဥပမာ ကိုယျစိတျဝငျတစား လုပျခငျြတဲ့ ကိုယျဝါသနာပါတဲ့ အလုပျမဟုတျပဲ နဲ့ . . . ဘာလုပျရငျကောငျးမလဲ ဘာလုပျရငျမွတျမလဲ ဆိုတဲ့ အတှေးမြိုးနဲ့ လုပျတဲ့ အလုပျမြိုးတှပေါ။ ဒါပမေယျ့ အခွားလူတှကေို လှမျးမိုးနိုငျစှမျးရှိတဲ့ ခေါငျးဆောငျတှေ၊ အဖှဲ့အစညျးတှကေတော့ ကြှနျတျောတို့နဲ့ ပွောငျးပွနျနညျးလမျးဖွဈတဲ့ အတှငျးမှ အပွငျသို့ ခဉျြးကပျမှု. ဘာအတှကျလဲ ဘာကွောငျ့လဲ ဆိုတာကို ပထမဆုံး ဦးစာပေး သုံးလရှေိ့ပါတယျ။
အားလုံးကသိကွတဲ့ Apple ကုမ်ပဏီကို ဥပမာထားပါရစေ။ အကယျ၍ Apple ကုမ်ပဏီက အခွားကုမ်ပဏီတှလေိုပဲ “ကြှနျတျောတို့ဆီက အကောငျးဆုံးကှနျပြူတာတှေ ထုတျလုပျပါတယျ။ ဒီကှနျပြူတာတှကေ ဒီဇိုငျးသသေပျလှပပွီး အသုံးပွုရလှယျကူပါတယျ။ တဈလုံးလောကျ ၀ယျယူသုံးစှဲကွညျ့ပါ” လို့ ကွျောငွာမယျဆိုရငျ သငျဝယျခငျြပါသလား။ သငျ့စိတျကို ထူးထူးခွားခွားမဆှဲဆောငျနိုငျဘူးဆိုတာ သခြောပါတယျ။ ကြှနျတျောတို့ အမြားစုက ဒီလိုပဲ ဆကျသှယျလရှေိ့ကွပါတယျ။ ကြှနျတျောတို့ ဘာလုပျထားတယျ။ ဘယျလို ကှဲပွားတယျဆိုတာလောကျကိုပဲ အလေးပေးဖျောပွနကွေပါတယျ။ ဒီနညျးလမျးက လူတှရေဲ့စိတျကို လှမျးမိုးနိုငျစှမျးမရှိပါဘူး။
Apple ရဲ့ ဆကျသှယျပုံကတော့ ဒီလိုပါ။
“ကြှနျတျောတို့ဘာပဲလုပျလုပျ အခွအေနတေဈရပျကို ပွောငျးလဲနိုငျမယျလို့ ယုံကွညျပါတယျ။ ကှဲပွားခွားနားတဲ့ တှေးချေါမှုတှကေို ကြှနျတျောတို့ ယုံကွညျလကျခံထားပါတယျ။ လကျရှိအခွအေနကေို ပွောငျးလဲပဈလိုကျနိုငျဖို့အတှကျ ကြှနျတျောတို့ရဲ့ ထုတျကုနျတှကေို ဒီဇိုငျးဆနျးသဈပွီး သုံးစှဲသူအဆငျပွအေောငျ ဖနျတီးထုတျလုပျရပါတယျ။ ဒီလိုနဲ့ ကြှနျတျောတို့ အကောငျးဆုံးကှနျပြူတာတှကေို ထုတျလုပျနိုငျခဲ့ပါတယျ။ တဈလုံးလောကျ စမျးသုံးကွညျ့ပါ။”
ဆကျသှယျပုံခွားနားခကျြကို သငျမွငျပါသလား။ ကှနျပြူတာတဈလုံးလောကျ ၀ယျသုံးကွညျ့ခငျြစိတျပျေါသှားမှာ သခြောပါတယျ။ အဓိကအခကျြကတော့ လူတှကေ သငျဘာလုပျလဲဆိုတာက ကွညျ့တာမဟုတျပါဘူး။ သငျဘာကွောငျ့လုပျလဲဆိုတာကိုပဲ ကွညျ့တတျကွတယျဆိုတာပါပဲ။
ဒီလိုဆကျသှယျလှမျးမိုးနိုငျမှုကွောငျ့ပဲ ကြှနျတျောတို့အားလုံးက Apple ကှနျပြူတာတှကေို ၀ယျခငျြကွသလို Apple ထုတျလုပျတဲ့ MP3 player နဲ့ မိုဘိုငျးလျဖုနျးတှကေိုလညျး ယုံယုံကွညျကွညျ ၀ယျယူသုံးစှဲလိုစိတျရှိကွပါတယျ။ တကယျတော့ Apple က သူ့ရဲ့ပွိုငျဖကျတှနေညျးတူ ကှနျပြူတာကုမ်ပဏီတဈခု ဖွဈပါတယျ။ အခွားနညျးပညာကုမ်ပဏီတှလေညျး Apple ထုတျကုနျတှလေောကျ အရညျအသှေးရှိတဲ့ ပစ်စညျးတှကေို ထုတျလုပျနိုငျကွပါတယျ။ Dell ကုမ်ပဏီက MP3 စကျတှနေဲ့ DVR စကျတှေ ထုတျလုပျရောငျးခခြဲ့ဖူးပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ၀ယျယူသုံးစှဲသူ အလှနျနညျးပါတယျ။ ဘာကွောငျ့မြာ Dell ကုမ်ပဏီထုတျ MP3 ကို မဝယျခငျြရတာလဲ စဉျးစားကွညျ့ပါ။ အဖွကေ ရှငျးပါတယျ။ Dell က ကှနျပြူတာထုတျလုပျတဲ့ ကုမ်ပဏီတဈခုဖွဈနလေို့ပါ။ ဒီလောကျဆိုရငျ လူတှကေ သငျဘာလုပျလဲဆိုတာထကျ ဘာကွောငျ့လုပျတာလဲဆိုတာကို ပိုစိတျဝငျစားတတျကွတာကို သဘောပေါကျမှာပါ။
Golden Circle ကို အတှငျးကနေ အပွငျကို ပွောငျးပွနျဆကျသှယျတဲ့နညျးလမျးဟာ အယူအဆ သကျသကျ မဟုတျပါဘူး။ ကြှနျတျောတို့ ဦးနှောကျဖှဲ့စညျးပုံနဲ့ ဆိုငျပါတယျ။ ကြှနျတျောတို့ရဲ့ ဦးနှောကျကို Golden Circle ရဲ့ ပါဝငျအစိတျအပိုငျးတှအေတိုငျး အပိုငျး(၃)ခုနဲ့ ဖှဲ့စညျးထားတာဖွဈပါတယျ။ Neocortex လို့ ချေါတဲ့ ဦးနှောကျရဲ့ အပွငျဖကျဆုံးအလှာဟာ What ကို ကိုယျစားပွုပါတယျ။ ကြိုးကွောငျးဝဖေနျမှုတှေ၊ ဘာသာစကား ဆနျးစဈမှုတှကေို တာဝနျယူလုပျဆောငျပေးတဲ့အပိုငျးဖွဈပါတယျ။ အတှငျးဖကျအပိုငျး(၂)ခုကတော့ Limbic brains လို့ချေါပွီး ယုံကွညျမှု၊ သစ်စာတရား စတဲ့ခံစားခကျြတှကေို သိရှိတဲ့အပိုငျးဖွဈပါတယျ။ ဒီအတှငျးပိုငျး(၂)ခုက လူတှရေဲ့အပွုအမူ၊ ဆုံးဖွတျခကျြခမြှတျခွငျး တှကေို တာဝနျယူလုပျဆောငျပေးတာ ဖွဈပါတယျ။
ဒါ့ကွောငျ့ ကြှနျတျောတို့အနနေဲ့ အပွငျကနေ အတှငျးကို ဆကျသှယျမယျဆိုရငျ လူတှကေ အကြိုးရှိမရှိ၊ ကောငျးမကောငျး အခကျြအလကျတှကေို နားလညျနိုငျမှာဖွဈပမေယျ့ သူတို့ရဲ့အပွုအမူကိုတော့ လှုံ့ဆျောနိုငျစှမျးမရှိပါဘူး။ အတှငျးမှအပွငျသို့ ဆကျသှယျရာမှာတော့ ကြှနျတျောတို့ဟာ အပွုအမူကိုတာဝနျယူထားတဲ့ အပိုငျးကို တိုကျရိုကျဆကျသှယျပွောဆိုတာဖွဈပါတယျ။ ပွီးတော့မှ ဒီအခကျြကို ခိုငျမာစနေိုငျတဲ့ အရာတှနေဲ့ ထပျလောငျးပွီး ယုံကွညျမှုကို ရယူတာဖွဈပါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ အတှငျးမှ အပွငျသို့ ဆကျသှယျမှုကို လူတှကေ ပိုပွီး ယုံကွညျသကျဝငျတတျကွတာဖွဈပါတယျ။
သငျ့ရဲ့ Why ကို သငျကိုယျတိုငျမသိရငျ အခွားလူတှကေလညျး သိမှာမဟုတျပါဘူး။ ဒါဆို လူတှကေို သငျပွောတာလကျခံလာအောငျ ဘယျလိုပွောပွောရမှာမဟုတျသလို သငျဖွဈစခေငျြတာကို ဖွဈလာဖို့လညျး တတျနိုငျမှာမဟုတျပါဘူး။ အဓိကဆိုလိုရငျးက လူတှကေို သငျယုံကွညျတဲ့အတိုငျး ထပျတူယုံကွညျလာစဖေို့ပဲ ဖွဈပါတယျ။ ယုံကွညျခကျြတူတဲ့သူတှနေဲ့အတူ အလုပျတှဲလုပျဖို့ပါ။ အကယျ၍ အလုပျလိုအပျသူတဈယောကျကို အလုပျပေးလိုကျတယျဆိုပါစို့။ သူက ငှကွေေးအတှကျပဲ အလုပျလုပျမှာဖွဈပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ သငျနဲ့ ယုံကွညျခကျြတူသူတဈယောကျကို အလုပျပေးလိုကျတယျဆိုရငျတော့ သှေးခြှေးနဲ့ရငျးပွီး သငျ့အတှကျ အလုပျလုပျပေးပါလိမျ့မယျ။ ဒီအကွောငျးနဲ့ ပတျသကျပွီး Wright ညီနောငျက ဥပမာကောငျးတဈခုဖွဈပါတယျ။
၂၀ ရာစုနှဈအစပိုငျးမှာတုနျးက လူတှကေောငျးကငျမှာ ပြံသနျးသှားနိုငျဖို့ လူတိုငျးက စိတျဝငျစားကွပါတယျ။ ဒီကိစ်စအောငျမွငျဖို့အတှကျ Samuel Pierpont Langley ဆိုသူက လုပျနိုငျလိမျ့မယျလို့ ထငျခဲ့ကွပါတယျ။ Samuel ကို ကောငျးကငျမှာပြံသနျးနိုငျတဲ့ ယန်တရားတီထှငျဖို့အတှကျ စဈဘကျက ဒျေါလာ(၅၀၀၀၀) ပံပိုးပေးပါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ သူက အတျောဆုံးပုဂ်ဂိုဟျတှကေို ငှားယမျးပွီး လုပျဆောငျခဲ့ပါတယျ။ နာမညျကြျော သတငျးစာတှကေလညျး သူနောကျကို တဈကောကျကောကျလိုကျပွီး သတငျးတှေ ဖျောပွခဲ့ပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ အခုအခြိနျမှာ ကြှနျတျောတို့ အမြားစုက သူ့အကွောငျးကို မကွားဖူးကွတာ ဘာလိုဖွဈလို့ပါလဲ။
ဒီလို Samuel Pierpont Langley ကို အားလုံးက အာရုံစိုကျနကွေတဲ့အခြိနျမှာ Orville Wright နဲ့ Wilbur Wright တို့ ညီအဈကို နှဈဦးကို သိတောငျမသိကွပါဘူး။ သူတို့မှာ ငှကွေေးလညျး မရှိပါဘူး။ သူတို့ရဲ့ စကျဘီးဆိုငျလေးက ရတဲ့ အကြိုးအမွတျနဲ့ အိပျမကျကိုအကောငျအထညျဖျောနခေဲ့ကွတာဖွဈပါတယျ။ သူတို့ညီအဈကိုနှဈယောကျအပွငျ သူတို့နဲ့အတူတှဲလုပျခဲ့သူတှကေလညျး ဘှဲ့ရပညာတတျတှမေဟုတျပါဘူး။ ဘယျသတငျးစာကမှလဲ သူတို့အကွောငျးကို ဖျောပွတာမြိုး မရှိပါဘူး။ ဒါပမေယျ့ ကှဲပွားခွားနားခကျြကတော့ Wright ညီနောငျက ရညျရှယျခကျြ၊ ယုံကွညျခကျြရှိရှိနဲ့ လုပျခဲ့တာဖွဈပါတယျ။ ပြံသနျးနိုငျတဲ့ စကျပစ်စညျးတဈခုကို တီထှငျနိုငျရငျ ကမ်ဘာကွီးပွောငျးလဲသှားမယျဆိုတာကို ညီအဈကိုနှဈယောကျစလုံးက ယုံကွညျခဲ့ပါတယျ။ Samuel Pierpont Langley ကတော့ သူအောငျမွငျဖို့ သူခမျြးသာဖို့ စတဲ့ ရလဒျတှကေိုပဲ အာရုံစိုကျခဲ့တာဖွဈပါတယျ။ ဒီလို ရညျရှယျခကျြ အကွောငျးရငျးခငျြး မတူညီတာကွောငျ့ Wright ညီနောငျနဲ့ နောကျလိုကျအဖှဲ့က သှေးရောခြှေးရော ရငျးပွီး အိပျမကျကို ၀ိုငျးဝနျးအကောငျအထညျ ဖျောနိုငျခဲ့ကွပမေယျ့ Samuel ရဲ့ အတျောဆုံးအဖှဲ့ကတော့ ငှကွေေးအတှကျပဲ လုပျခဲ့တာကွောငျ့ ဘာမှဖွဈမလာခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
လူတှဟော ရညျရှယျခကျြခငျြး၊ ယုံကွညျခကျြခငျြး တူမှ လကျတှဲတတျကွတာကို Martin Luther King ကို ဘာလို့ ထောကျခံခဲ့ကွတာလဲဆိုတာကွညျ့ရငျ သိနိုငျပါတယျ။ (၁၉၆၃)ခုနှဈ နှရောသီမှာ ၀ါရှငျတနျမွို့က Martin Luther King ရဲ့ ဟောပွောပှဲကို တကျဖို့ လူပေါငျး (၂၅၀၀၀၀)ရောကျလာခဲ့ပါတယျ။ ဒီဟောပွောပှဲအတှကျ ဖိတျစာတှလေဲ မကမျးထားပါဘူး။ နစှေဲ့နဲ့ အခြိနျသိဖို့ အငျတာနကျမှာတကျကွညျ့စရာ ၀ကျဘျဆိုကျလညျး မရှိသေးပါဘူး။ ဒီလောကျလူအမြားကွီး တဈခြိနျတညျး ဘာကွောငျ့ရောကျလာခဲ့တာလဲဆိုတာ အံ့သွစရာပါပဲ။ Martin Luther King တဈယောကျတညျး လူမဲတနျးတူအခှငျ့အရေးအတှကျ တိုကျပှဲဝငျနတောမဟုတျပါဘူး။ သူပွောတဲ့တဈခြို့စိတျကူးတှကေ မကောငျးပါဘူး။ ဒါပမေယျ့ သူမှာ အစှမျးတဈခုတော့ရှိပါတယျ။ သူက အမရေိကနျပွညျထောငျစုက ပွောငျးလဲဖို့ လိုနပွေီလို့ လူတှကေို မပွောပါဘူး။ သူ့ရဲ့ယုံကွညျခကျြကိုပဲပွောပါတယျ။ သူ့ယုံကွညျခကျြကို တဈထပျတညျး ယုံကွညျသူတှကေ သူ့လမျးကွောငျးကို လိုကျလြှောကျကွပါတယျ။ သူတို့ရဲ့ယုံကွညျခကျြကို အခွားလူတှကေို ပွောပါတယျ။ ဒီလိုနဲ့ ယုံကွညျခကျြထပျတူကတြဲ့ လူပေါငျး (၂၅၀၀၀၀)ဟာ တဈခြိနျတညျး တဈနရောတညျး ရောကျရှိလာခဲ့ကွတာဖွဈပါတယျ။
ဒီနရောမှာ တဈခုစဉျးစားရမှာက ရောကျရှိလာကွတဲ့ လူတှထေဲမှာ Martin Luther King ကို အားပေးဖို့ လာရောကျကွသူ ဘယျနှဈယောကျရှိမယျထငျပါသလဲ။ တဈယောကျမှမရှိပါဘူး။ ဒီလူတှအေားလုံးဟာ သူတို့ရဲ့ ယုံကွညျခကျြကို ခပြွဖို့ တကူးတကအခြိနျပေးပွီး လာရောကျကွတာဖွဈပါတယျ။ Martin Luther King ပွောတဲ့ “I haveadream” မိနျ့ခှနျးတှထေဲမှာ သူတို့ရဲ့ ယုံကွညျခကျြ၊ ရညျရှယျခကျြကို သူတို့ရှာဖှတှေရှေိ့ပွီး ကိုယျပိုငျ ယုံကွညျခကျြအတှကျ ရပျတညျကွတာဖွဈပါတယျ။
ခေါငျးဆောငျနဲ့ ဦးဆောငျသူ မတူပါဘူး။ ခေါငျးဆောငျဆိုတဲ့သူတှကေ လုပျပိုငျခှငျ့အာဏာတဈခုကို ကိုငျစှဲထားပွီး ဦးဆောငျသူတှကေတော့ ကြှနျတျောတို့ကို လှမျးမိုးနိုငျပါတယျ။ တဈယောကျခငျြးပဲဖွဈဖွဈ၊ အဖှဲ့အစညျးလိုကျပဲဖွဈဖွဈ ကြှနျတျောတို့ဟာ လှမျးမိုးနိုငျစှမျးရှိတဲ့ ဦးဆောငျသူနောကျကို လိုကျကွပါတယျ။ လိုကျခငျြလို့ကို လိုကျတာဖွဈပါတယျ။ လိုကျသငျ့လို့ လိုကျတာမဟုတျပါဘူး။ ဒါ့ကွောငျ့ အကွောငျးရငျး ရညျရှယျခကျြ Why နဲ့ စတငျသူတှကေသာ ပတျဝနျးကငျြကို လှမျးမိုးနိုငျစှမျးရှိပွီး အားလုံးကို ဦးဆောငျနိုငျမှာ ဖွဈကွောငျး ဖျောပွလိုကျပါတယျ။
နောကျဆုံး အကောငျးဆုံး ဥပမာကတော့ လကျရှိမွနျမာနျိုငျငံက ကိုယျကြိုးမကွညျ့ အမြားအကြိုး အတှကျရညျမှနျးခကျြ ကွီးကွီး တုံးတျိုကျတိုကျ ကြားကိုကျကိုကျ ပွညျသူတှေ ကောငျးစားရေးအတှကျ ခွလှေမျးမတှနျ့ပဲ လုပျဆောငျပေးနတေဲ့ နိုငျငံရေးခေါငျးဆောငျ ကို ကွညျ့လိုကျပါ။ သူ အောငျမွငျနတေယျထငျပါသလား ။ လူတှေ အပျေါကော လှမျးမိုး နိုငျနပွေီထငျလား ။ သူ့ နနေဲ့ What . ဆိုတာကို ရှတေ့နျးမတငျထားပါဘူး။ လှတျလပျတဲ့ နိုငျငံ တျောတဈခု ထူထောငျဖို့ သကျသကျမဟုတျပါဘူး။ သူ အနနေဲ့လူသားတိုငျး တနျးတူ အခှငျ့အရေး ရရှိရမယျ . ပွညျသူတှေ အားလုံး စညျးလုံး ညီညှတျပွီး ခတျေမှီ တိုးတကျသာယာ လှပတဲ့ နိုငျငံ တျော သဈ ကွီးမှာလူတိုငျး တနျးတူ နထေိုငျနိုငျရမယျ ဆိုတဲ့ ယုံကွညျခကျြ ကွောငျ့ လုပျနတောပါ။ အဲဒီ ယုံ ကွညျခကျြကသာ နိုငျငံသား အားလုံးရဲ့ ယုံကွညျခကျြနဲ့ထပျတူထပျမြှ ကလြို့ အကုနျဟတျထိပွီး စှမျးဆောငျရညျ အရညျအခငျြးနဲ့ ပွညျ့ဝတဲ့ သူ့ ကို ခေါငျးဆောငျ ဦးဆောငျသူအဖွဈ နှလုံးသာနဲ့ ရငျးပွီး တငျမွှောကျထားကွတာပါ။
လမျးကွုံ တုနျးလေး Gentleman Magazine အကွောငျးဆကျပွောပွပါမယျ။ Gentleman Magazine ကို ဘာကွောငျ့လုပျဆောငျဖွဈခဲ့တာလဲ ? GM ထူထောငျသူကိုယျတုိုငျက ဆယျကြျောသကျ အရှယျမှာ ဘာမဆို ဘုမသိ ဘမသိ အလှနျနဲ့ အသိပညာကငျးမဲ့ ခဲ့ပါတယျ။ ရှမှေ့ာက လညျး ဦးဆောငျ လမျးပွပေးမယျ့ အကို တှလေဲ မရှိခဲ့တဲ့ အတှကျ အခဈြရေး ၊ စီးပှားရေး ၊လူမှုရေး တှေ မှာ အမှားမြားစှာနဲ့ အခကျအခဲ အမြိုးမြိုး ကွုံတှခေဲ့ရပါတယျ။ စာအုပျတှဖေတျဖို့ ကတြော့လဲ လလေ့ာမှုအားနညျးခဲ့တဲ့ အတှကျ ဘယျစာအုပျရှာဖတျရမှနျးမသိခဲ့ ပါဘူး။ အမှားတှေ မြားစှာ လုပျခဲ့ ပွီး အတှေ့ အကွုံ ကပဲ လလေ့ာသငျယူခဲ့ ရတဲ့ အတှကျ အခြိနျတှေ အမြားကွီး ဆုံးရှုံး ခဲ့ ရပါတယျ။ ဒီ အခကျအခဲ မြားစှာ ကို ဖွတျသနျးပွီး တဲ့ အခြိနျကာလကွာလာတဲ့ အခါ အပေါငျးအသငျးတှနေဲ့ စကားစမညျ ပွောဖွဈရာကနေ ဒါတှကေ လူတိုငျးနီးပါး ကွုံ တှနေ့ရေတဲ့ အခကျအခဲမြားဆိုတာကို သိရှိလာပါတယျ။ လကျရှိ အခြိနျမှာ လဲ အမှားမြား လုပျမွဲ လုပျစဲ . . အမှားတှကေပဲ ပညာယူနစေဲ ပါ။
ကိုယျ့ညီအကိုတှေ ကိုယျ့လုို အခြိနျအမြားကွီး ပေးပွီး အမှားတှကေနေ သငျခနျးစာ မယူရအောငျ . မမှားသငျ့တာတှေ မှားရအောငျ အတှအေ့ကွုံရှိပွီးသားလူထံမှ သငျခနျးစာယူနျိုငျအောငျ အငျတာနကျပျေါမှ ဆောငျးပါးကောငျးတာတှကေို ကိုယျ့အတှအေ့ကွုံနဲ့ရောသမမှပွေီး ပညာဗဟုသုတ ရစရေနျ GM ကနေ ဘာသာပွနျကာ တဆငျ့ မြှဝပေေးနတောဖွဈပါတယျ။ GM ပရိတျသတျတှေ အမြားတကာ လေးစားခဈြခငျရတဲ့ ယောကျြားကောငျးမြား ဖွဈလာရငျပဲ ကွိုးစားရကြိုးနပျပွီခငျဗြာ။။။။။။
GM ရဲ့ တခွား စီးပှားရေး. အောငျမွငျရေး နှငျ့ ပကျသကျသော ဆောငျးပါးမြားကို ဖတျခငျြရငျ http://mmgentleman.com/category/money/ မှာအလှယျတကူ ဝငျရောကျလလေ့ာနိုငျပါတယျ။
Previous: Miss Universe Myanmar 2015 နှင့် တွေ့ဆုံခြင်း
Next: အများက မှတ်မိလွယ်သူတစ်ဦးဖြစ်ဖို့ လိုအပ်ချက်(၄)ခု